အမရေိကနျကို ရောကျလာခဲ့ပုံကို ရငျဖှငျ့လာတဲ့ အိပနျဆယျလို – Sport Gaber
အမရေိကနျကို ရောကျလာခဲ့ပုံကို ရငျဖှငျ့လာတဲ့ အိပနျဆယျလို
July 4, 2021 - by Sports Gaber - LeaveaComment
အာဏာသိမျးပွီးကာလတှမှောတော့ စကစ ကနအေပူတပွငျးနဲ့အလိုရှိနတေဲ့ ပနျဆယျလိုကတော့ လှတျမွောကျရာဖွဈတဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံကို သှားရောကျနိုငျခဲ့လို့ လူတှရေဲ့ဝဖေနျမှုကို ခံနရေပမေဲ့ ပနျဆယျလိုကတော့ အပွုံးမပကျြခဲ့ပါဘူး။ ဒီနမှေ့ာတော့ ပနျဆယျလို ကအမရေိကနျကိုရောကျလာခဲ့ပုံကို “အမရေိကနျမွေ
ကို စနငျးမိပုံက ထူးဆနျးတယျ။ လယောဉျဆငျးတာနဲ့ လယောဉျမယျက နာမညျကို မိုကျကချေါပွီး အရငျဆုံးထှကျခိုငျးတယျ။ လယောဉျပျေါက ဆငျးတာနဲ့ ရဲက လာချေါသှားရော။ ဘာလဲဟ… ငါ့ဘဝတော့ စမုံတုံးပွီလားပေါ့။အမှနျတကယျတော့ ဘာမှ မဟုတျဘူး။ ပုံမှနျခရီးသညျမဟုတျလို့ ဖွညျ့ရမယျ့ဖောငျတှမေ
တူလို့ ကွိုချေါတာ။ သကျပွငျးခပြွီး လာကွိုသူကားနဲ့ ပါသှားတော့ ကားပျေါက မွငျရတဲ့ မွငျကှငျးက ထူးဆနျးပွနျတယျ။လူမနတေဲ့ အိမျတှေ၊ အိမျပကျြကွီးတှေ၊ လူသူမရှိတဲ့ လမျးတှေ။ ငါရောကျလာတာ အမရေိကနျလား၊ အခွားဂွိုလျလားပေါ့။ အမရေိကနျဆိုတာ ဒါကွီးလားပေါ့။ ငါ့ကို ဟောလိဝုဒျဇာတျကားတှေ ဂငျြး
ထညျ့တာမြားလားပေါ့။အမရေိကနျရဲ့ Crime Rate အမွငျ့ဆုံးထဲက မွို့။ မွို့ပကျြနီးပါးဖွဈနတေဲ့ မွို့ကွီး။ အမရေိကနျ-ကနဒေါနယျစပျလိုငျးက Detroit ဆိုတဲ့မွို့။ လူမနဘေဲပဈထားတဲ့ အိမျပကျြကွီးတှဟော သရဲကားတှထေဲက အိမျတှလေိုပဲ။ နရေမယျ့နရောရောကျတော့ လေးယောကျခနျး၊ နှဈထပျကုတငျနှဈလုံးခထြားတဲ့
ဆယျပပေတျလညျ အခနျးလေး။ အမြားသုံးရခြေိုးခနျး၊အိမျသာ တနျးစီရသေးတာ။ အခနျးတံခါး သော့ခတျခှငျ့မရှိ။ နိုငျငံပေါငျးစုံက နိုငျငံရေးသမားတှေ စောငျ့ရှောကျပေးတဲ့နရောလို့ သိရတယျ။ အမှနျတကယျက စစခငျြး Culture Shock နဲ့ ကိုယျအရမျးတုနျလှုပျသှားတာ။ တကယျတမျးပွနျတှေးတော့ အရမျး
ဆိုးဝါးတဲ့နရောမြိုး မဟုတျပါဘူး။ သူစိမျးနိုငျငံ၊ သူစိမျးတှကွေား ကူကယျရာမဲ့။ ထမငျးရှာလို့မရတဲ့ မွို့။ ပေါငျမုနျ့နဲ့ ကွကျဥပွုတျအပွငျ ဘာမှမစားတတျတဲ့ Asian တောသူဘဝ။ ငတျလိုကျတာ ပွောမနနေဲ့။ Asian ဆို China ပဲ အသိမြားတော့ မနကျခငျးဆို နိဟောငျ၊နိဟောငျနဲ့ နှုတျဆကျပြူငှါကွလို့ China မဟုတျကွောငျး
တတျသမြှ အီးဂလိအတိုအစနဲ့ ရနျတှရေ့သေးတာ။ ရောကျပွီးနှဈရကျအကွာမှာ ဖောငျတဈခုမှာ လကျမှတျထိုးရတယျ။ Homeless ဖွဈကွောငျးဖောငျပေါ့။ ပွုံးမိတယျ။ တဆကျတညျးမှာ မကျြရညျက ဝဲတယျ။ ဆယျ့နှဈနှဈကြျောကွိုးစားခဲ့ပွီး သုံးလပဲနခှေငျ့ရလိုကျတဲ့ အိမျကိုတှေးရငျး ရငျထဲအောငျ့တယျ။ အဲ့အခြိနျက
ခံစားခကျြပါ။ လပိုငျးအတှငျးမှာ ဒီအရာတှကေို မပေ့ဈနိုငျလိုကျပွီ။ အရှိတရားကို လကျခံဖို့ ခကျခဲတဲ့အခြိနျတှကေို ကြျောဖွတျခဲ့ရဖူးတာပဲ။ တဈပတျ၊ဆယျရကျ အားတငျးနထေိုငျပမေယျ့ ဆကျမနနေိုငျတော့တာကွောငျ့ ဘာအကူအညီမှ မယူတော့ပါကွောငျးလကျမှတျထိုးပွီး မိတျဆှတေဈယောကျရဲ့မွို့လေးကို
ထှကျလာခဲ့တယျ။ ထောငျထဲဝတျဖို့ဆိုပွီး အသငျ့ထညျ့လာတဲ့ အဝတျအစားသုံးစုံ၊ အအေးဒီဂရီ Zero နီးနီးနရောကို အနှေးထညျသျောမှမပါဘဲ ရောကျခဲ့တယျ။ ပိုငျဆိုငျမှု၊ ငှကွေေး၊ မိသားစု၊ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ၊ ဘာတဈခုမှ မယူနိုငျခဲ့ပဲနဲ့ပေါ့။ဒီကာလမှာ ကိုယျ့ရဲ့လောကဓံကို တုံ့ပွနျပုံက အရငျလို
ပွငျးပွငျးထနျထနျမဟုတျဘူး။ အရငျက ကိုယျက အရာရာကို စိတျတငျးပွီး ရငျဆိုငျတယျ။ မာကြောတယျ။ မကျြရညျမကဘြူး။ ကိုယျခံစားရတာ လူမသိစရေဘူး။ အခုလို ဘဝရဲ့ကွုံဖူးသမြှထဲက အပွငျးထနျဆုံးသော လောကဓံကို ကွုံရခြိနျမှာ ကိုယျအရငျလို တငျးတငျးမာမာရငျဆိုငျရငျ အမွဈက လနျသှားမယျဆိုတာ
ကိုယျသိတယျ။ လယေူရာယိမျးတဲ့ ပနျးပွားပငျလို ရငျဆိုငျတယျ။ ဝမျးနညျးရငျ ငိုလိုကျတယျ။ တငျးခံမထားဘူး။ ငိုခလြိုကျတယျ။ ငိုပွီးရငျ ပွနျရုနျးထတယျ။ ရယျစရာမွငျရငျ ရယျလိုကျတယျ။ ဆဲခငျြရငျ ဆဲလိုကျတယျ။ အခွားသူတှရေဲ့ ကွုံတှရေ့မှုတှကေို တှေးပွီး ငါမှဒုက်ခရောကျနတော မဟုတျဘူးလို့ အထပျထပျ
ရိုကျသှငျးတယျ။ ငါက အရမျးကံကောငျးတဲ့သူ၊ ငါက သတှေငျးက လှတျလာတဲ့သူ၊ ငါက တျောပါသေးတယျပဲ တှေးတယျ။ ငိုခငျြလာရငျ ငိုပဈလိုကျတယျ။ ရယျခငျြလာရငျ ရယျပဈလိုကျတယျ။ အရာအားလုံးဟာ ကောငျးဖို့ဖွဈလာတာလို့ တှေးတယျ။ ဒီတျောလှနျရေးကလှဲရငျ ဖွဈပွီးခဲ့သမြှကို မပေ့ဈဖို့ ကွိုးစား
တယျ။ မတမျးတမိအောငျ နထေိုငျတယျ။ မလှမျးတတျအောငျ ရှငျသနျတယျ။ ဒါပမေယျ့ နာကွငျစသေူ အာဏာရူးတှကေို တဈစက်ကနျ့မှ မမဘေူ့းဆိတာပဲ။ ဒီကာလတှမှော ဒီအရာတှအေပွငျ အပွငျးအထနျ တိုကျခိုကျမှုတှကေို ကွုံခဲ့ရတယျ။ စိတျကထုံနသေလိုမြိုး ဘာမှကို မခံစားရတော့ဘူး။ ထူးထှေ မနာကွငျမိဘူး။
အသကျအန်တရာယျ ခွိမျးခွောကျခံရတာမြိုးတောငျ ရယျမိရုံအပွငျ ဘာမှမဖွဈမိတော့ဘူး။တဈခုခု ကွုံတှတေ့ယျ။ So What? ကိုယျလောကဓံကို တုံ့ပွနျတဲ့ပုံစံက So What ပါပဲ။ကွောကျလို့ဆိုပွီး ပွနျလှညျ့ပွေးလို့ရတဲ့အထဲမှာ ဘဝမပါဘူး။ လောကဓံဆိုတာက လိမ်မာခငျြလှနျးရငျ တဈခကျြပိုရိုကျတတျတာမို့ မိုကျ
မိုကျကနျးကနျးပဲ တုံ့ပွနျတယျ။ ရှငျနိုငျဖို့ သနျရမယျ၊ သနျမာရမယျ။ ရနျသူက သစေခေငျြတဲ့အခါ ရှငျအောငျနရေတာလညျး တိုကျပှဲပဲတဲ့။ ဒီတိုကျပှဲမှာ ကိုယျနိုငျတယျ။ လှလှပပ နိုငျတယျ။ သရေမယျ့ပှဲမှာ မသအေောငျနနေိုငျတာကိုပဲ ဂုဏျယူတယျ။ဆုံးရှုံးစရာရှိတာ မှနျသမြှ ဒီအခြိနျမှာ ဆုံးရှုံးထားလိုကျခငျြတယျ။ ဒီ
အခြိုးအကှပွေ့ငျးပွငျးမှာ ကိုယျအမြားကွီး သငျယူခဲ့တယျဆိုတာပါပဲ။ အတှအေ့ကွုံဆိုတာ အကောငျးဆုံးကြောငျးတျော။သငျတနျးကွေးက ကွေးကွီးလှနျးတယျတဲ့။ ကိုယျက ဒီကြောငျးတျောကနေ ဂုဏျထူးယူမယျ့ ကြောငျးသူဆိုတာပါပဲ။ဒီဘဝကွီးဆီက ဘာမှမလိုခငျြတော့ဘူးဆိုတဲ့ Comfort Zone မှာသာ ကိုယျ့ဘဝ
ကိုကိုယျ ပဈခရြငျ ပဈခထြားမှာ။ သစေခေငျြသူတှေ လိုကျသတျနသေရှေ့ လှလှပပ ရှငျသနျပွနဦေးမှာ။ ငါပွနျတညျဆောကျမယျ့အရာတှဟော နငျတို့ဖွိုခခြဲ့တဲ့အရာတှထေကျ ပိုလှပစရေမယျ။ အခြိနျတညျးမှာပဲ နငျတို့ကို ရတဲ့နရောက ဖွိုခနြမေယျဆိုတာ ကတိပေးတယျ။
” ဆိုပွီး ရေးသားထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Source: Pencilo On Earth
အမေရိကန်ကို ရောက်လာခဲ့ပုံကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အိပန်ဆယ်လို
အာဏာသိမ်းပြီးကာလတွေမှာတော့ စကစ ကနေအပူတပြင်းနဲ့အလိုရှိနေတဲ့ ပန်ဆယ်လိုကတော့ လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို သွားရောက်နိုင်ခဲ့လို့ လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကို ခံနေရပေမဲ့ ပန်ဆယ်လိုကတော့ အပြုံးမပျက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီနေ့မှာတော့ ပန်ဆယ်လို ကအမေရိကန်ကိုရောက်လာခဲ့ပုံကို “အမေရိကန်မြေကို
စနင်းမိပုံက ထူးဆန်းတယ်။ လေယာဉ်ဆင်းတာနဲ့ လေယာဉ်မယ်က နာမည်ကို မိုက်ကခေါ်ပြီး အရင်ဆုံးထွက်ခိုင်းတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းတာနဲ့ ရဲက လာခေါ်သွားရော။ ဘာလဲဟ… ငါ့ဘဝတော့ စမုံတုံးပြီလားပေါ့။အမှန်တကယ်တော့ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန်ခရီးသည်မဟုတ်လို့ ဖြည့်ရမယ့်ဖောင်တွေမတူလို့ ကြိုခေါ်
တာ။ သက်ပြင်းချပြီး လာကြိုသူကားနဲ့ ပါသွားတော့ ကားပေါ်က မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ထူးဆန်းပြန်တယ်။လူမနေတဲ့ အိမ်တွေ၊ အိမ်ပျက်ကြီးတွေ၊ လူသူမရှိတဲ့ လမ်းတွေ။ ငါရောက်လာတာ အမေရိကန်လား၊ အခြားဂြိုလ်လားပေါ့။ အမေရိကန်ဆိုတာ ဒါကြီးလားပေါ့။ ငါ့ကို ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေ ဂျင်းထည့်တာများလားေ
ပါ့။အမေရိကန်ရဲ့ Crime Rate အမြင့်ဆုံးထဲက မြို့။ မြို့ပျက်နီးပါးဖြစ်နေတဲ့ မြို့ကြီး။ အမေရိကန်-ကနေဒါနယ်စပ်လိုင်းက Detroit ဆိုတဲ့မြို့။ လူမနေဘဲပစ်ထားတဲ့ အိမ်ပျက်ကြီးတွေဟာ သရဲကားတွေထဲက အိမ်တွေလိုပဲ။ နေရမယ့်နေရာရောက်တော့ လေးယောက်ခန်း၊ နှစ်ထပ်ကုတင်နှစ်လုံးချထားတဲ့ ဆယ်ပေပတ်လည်
အခန်းလေး။ အများသုံးရေချိုးခန်း၊အိမ်သာ တန်းစီရသေးတာ။ အခန်းတံခါး သော့ခတ်ခွင့်မရှိ။ နိုင်ငံပေါင်းစုံက နိုင်ငံရေးသမားတွေ စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့နေရာလို့ သိရတယ်။ အမှန်တကယ်က စစချင်း Culture Shock နဲ့ ကိုယ်အရမ်းတုန်လှုပ်သွားတာ။ တကယ်တမ်းပြန်တွေးတော့ အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့နေရာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူ
စိမ်းနိုင်ငံ၊ သူစိမ်းတွေကြား ကူကယ်ရာမဲ့။ ထမင်းရှာလို့မရတဲ့ မြို့။ ပေါင်မုန့်နဲ့ ကြက်ဥပြုတ်အပြင် ဘာမှမစားတတ်တဲ့ Asian တောသူဘဝ။ ငတ်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့။ Asian ဆို China ပဲ အသိများတော့ မနက်ခင်းဆို နိဟောင်၊နိဟောင်နဲ့ နှုတ်ဆက်ပျူငှါကြလို့ China မဟုတ်ကြောင်း တတ်သမျှ အီးဂလိအတိုအစနဲ့ ရန်ေ
တွ့ရသေးတာ။ ရောက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာ ဖောင်တစ်ခုမှာ လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ Homeless ဖြစ်ကြောင်းဖောင်ပေါ့။ ပြုံးမိတယ်။ တဆက်တည်းမှာ မျက်ရည်က ဝဲတယ်။ ဆယ့်နှစ်နှစ်ကျော်ကြိုးစားခဲ့ပြီး သုံးလပဲနေခွင့်ရလိုက်တဲ့ အိမ်ကိုတွေးရင်း ရင်ထဲအောင့်တယ်။ အဲ့အချိန်က ခံစားချက်ပါ။ လပိုင်းအတွင်းမှာ ဒီအရာေ
တွကို မေ့ပစ်နိုင်လိုက်ပြီ။ အရှိတရားကို လက်ခံဖို့ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရဖူးတာပဲ။ တစ်ပတ်၊ဆယ်ရက် အားတင်းနေထိုင်ပေမယ့် ဆက်မနေနိုင်တော့တာကြောင့် ဘာအကူအညီမှ မယူတော့ပါကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့မြို့လေးကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ထောင်ထဲဝတ်ဖို့ဆိုပြီး အသင့်ထ
ည့်လာတဲ့ အဝတ်အစားသုံးစုံ၊ အအေးဒီဂရီ Zero နီးနီးနေရာကို အနွေးထည်သော်မှမပါဘဲ ရောက်ခဲ့တယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ငွေကြေး၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ၊ ဘာတစ်ခုမှ မယူနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ပေါ့။ဒီကာလမှာ ကိုယ့်ရဲ့လောကဓံကို တုံ့ပြန်ပုံက အရင်လို ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ဘူး။ အရင်က ကိုယ်က အရာရာကို စိတ်တ
င်းပြီး ရင်ဆိုင်တယ်။ မာကျောတယ်။ မျက်ရည်မကျဘူး။ ကိုယ်ခံစားရတာ လူမသိစေရဘူး။ အခုလို ဘဝရဲ့ကြုံဖူးသမျှထဲက အပြင်းထန်ဆုံးသော လောကဓံကို ကြုံရချိန်မှာ ကိုယ်အရင်လို တင်းတင်းမာမာရင်ဆိုင်ရင် အမြစ်က လန်သွားမယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိတယ်။ လေယူရာယိမ်းတဲ့ ပန်းပြားပင်လို ရင်ဆိုင်တယ်။ ဝမ်းနည်း
ရင် ငိုလိုက်တယ်။ တင်းခံမထားဘူး။ ငိုချလိုက်တယ်။ ငိုပြီးရင် ပြန်ရုန်းထတယ်။ ရယ်စရာမြင်ရင် ရယ်လိုက်တယ်။ ဆဲချင်ရင် ဆဲလိုက်တယ်။ အခြားသူတွေရဲ့ ကြုံတွေ့ရမှုတွေကို တွေးပြီး ငါမှဒုက္ခရောက်နေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ အထပ်ထပ်ရိုက်သွင်းတယ်။ ငါက အရမ်းကံကောင်းတဲ့သူ၊ ငါက သေတွင်းက လွတ်လာတဲ့သူ၊
ငါက တော်ပါသေးတယ်ပဲ တွေးတယ်။ ငိုချင်လာရင် ငိုပစ်လိုက်တယ်။ ရယ်ချင်လာရင် ရယ်ပစ်လိုက်တယ်။ အရာအားလုံးဟာ ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာလို့ တွေးတယ်။ ဒီတော်လှန်ရေးကလွဲရင် ဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှကို မေ့ပစ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ မတမ်းတမိအောင် နေထိုင်တယ်။ မလွမ်းတတ်အောင် ရှင်သန်တယ်။ ဒါပေမယ့် နာကြင်စေ
သူ အာဏာရူးတွေကို တစ်စက္ကန့်မှ မမေ့ဘူးဆိတာပဲ။ ဒီကာလတွေမှာ ဒီအရာတွေအပြင် အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ကြုံခဲ့ရတယ်။ စိတ်ကထုံနေသလိုမျိုး ဘာမှကို မခံစားရတော့ဘူး။ ထူးထွေ မနာကြင်မိဘူး။ အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခံရတာမျိုးတောင် ရယ်မိရုံအပြင် ဘာမှမဖြစ်မိတော့ဘူး။
တစ်ခုခု ကြုံတွေ့တယ်။ So What? ကိုယ်လောကဓံကို တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံက So What ပါပဲ။ကြောက်လို့ဆိုပြီး ပြန်လှည့်ပြေးလို့ရတဲ့အထဲမှာ ဘဝမပါဘူး။ လောကဓံဆိုတာက လိမ္မာချင်လွန်းရင် တစ်ချက်ပိုရိုက်တတ်တာမို့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်းပဲ တုံ့ပြန်တယ်။ ရှင်နိုင်ဖို့ သန်ရမယ်၊ သန်မာရမယ်။ ရန်သူက သေစေချင်တဲ့အခါ ရှ
င်အောင်နေရတာလည်း တိုက်ပွဲပဲတဲ့။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ကိုယ်နိုင်တယ်။ လှလှပပ နိုင်တယ်။ သေရမယ့်ပွဲမှာ မသေအောင်နေနိုင်တာကိုပဲ ဂုဏ်ယူတယ်။
ဆုံးရှုံးစရာရှိတာ မှန်သမျှ ဒီအချိန်မှာ ဆုံးရှုံးထားလိုက်ချင်တယ်။ ဒီအချိုးအကွေ့ပြင်းပြင်းမှာ ကိုယ်အများကြီး သင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အတွေ့အကြုံဆိုတာ
အကောင်းဆုံးကျောင်းတော်။သင်တန်းကြေးက ကြေးကြီးလွန်းတယ်တဲ့။ ကိုယ်က ဒီကျောင်းတော်ကနေ ဂုဏ်ထူးယူမယ့် ကျောင်းသူဆိုတာပါပဲ။ဒီဘဝကြီးဆီက ဘာမှမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ Comfort Zone မှာသာ ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ် ပစ်ချရင် ပစ်ချထားမှာ။ သေစေချင်သူတွေ လိုက်သတ်နေသရွေ့ လှလှပပ ရှင်သန်ပြနေ
ဦးမှာ။ ငါပြန်တည်ဆောက်မယ့်အရာတွေဟာ နင်တို့ဖြိုချခဲ့တဲ့အရာတွေထက် ပိုလှပစေရမယ်။ အချိန်တည်းမှာပဲ နင်တို့ကို ရတဲ့နေရာက ဖြိုချနေမယ်ဆိုတာ ကတိပေးတယ်။
” ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးမွှကေို အမှတျမထငျတူးဖျောတှရှေိ့မိခဲ့ကွတဲ့ ဆောကျလုပျရေးသမားမြား
ညဘကျတိုငျး ခှေးတှေ ဟောငျနလေို့ CCTV တပျကွညျ့လိုကျသောအခါ
ရုပျအရမျးခြောနလေို့ဆိုပွီး တိုငျးပွညျကနေ နှငျထုတျခွငျးခံခဲ့ရသော အမြိုးသားရဲ့အဖွဈ
Previous Article မွနျမာအိမျနီခငျြး နိုငျငံတှငျ ၂၄ နာရီအတှငျး ကိုဗဈကွောငျ့ လူပေါငျး ၁၃၂ ဦး သဆေုံး
Next Article အပေးအယူသဘောရဲ့ အနောကျမှာ နှဦေးဟာ မဝေးတော့ပါဘူးး(အခြိနျတိုတိုနဲ့ အောငျပှဲဆငျတော့မယျ)